DILLIKADA DIIRIGA AH AMA MA AHA: WAA WARSHADANI WAA DURI, SIDA LOO SOO SAARO CAWSKA IYO ABUURKA, IYO CABIN WAKIIL DAAWEYN, MA JIRAAN WAX KHILAAF AH? - BEER CAGAARAN
Miyuu jiraa dhar caadi ah ama maahan? Isticmaal warshad sida durayo
Dill waa baastar loo isticmaalo karinta, siinaya suxuunta ma aha oo kaliya carafin cajiib ah, laakiin sidoo kale dhadhan gaar ah. Makhaayad qudha, marinade ama saladh kaliya ayaa lagu dhammaystiray iyada oo aan ka baxeynin cagaarka gaarka ah. Ma aha oo kaliya dhadhanka, laakiin sidoo kale aad u faa'iido leh, sida waxa ku jira fitamiin B, fitamiin C, carotene, folic iyo nicotinic acid, saliidaha lagama maarmaanka ah, antioxidants, iyo waliba noocyo kala duwan oo faa'iido leh raad raac.
Laakiin, marka laga reebo sifooyinka faa'iido leh, dill sidoo kale wuxuu leeyahay saamayn bogsiinaya, taas oo Masaarida qadiimiga ah ka ogaaday oo si guul leh ku dabaqay ficilka. Waxay xitaa daweeyeen Fircoonkii 5,000 oo sano ka hor.
Miyuu dhirta dhirta ama maahan?
Lovers of daawada dhaqameedku waxay si xiiso leh u daneynayaan su'aasha: dilley duriinka? Waxay soo baxday in haa, sidee kale! Waa daaweyn maqaar fiican oo dabiici ah, oo leh potassium-sparing - taas oo muhiim ah, maaddaama inta badan daawooyinka lagu durayo badiyo jirka oo daciifiya jidhka, ka dhalaalaya potassium jirka.
Marka aad qaadaneyso lacagaha loo diyaariyay dillada, waxqabadka kalyaha ayaa la hawlgeliyaa, natiijada, mugga dheellitirka qulqulka ayaa kordhaya.
Sidaa darteed, fudaydinta socodka dheecaanka, dilladu waxay ka saartaa bararka waxayna ka saartaa sunta iyo qashinka jirka.
Faleebo ee dhirta mucjisada ah ee dill ee lagu daro durayo, sidoo kale wuxuu leeyahay:
waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga;
marinaysa weelasha dhiiga;
waxay ka caawisaa cystitiska;
si fudud u kicin kara hurdo la'aan;
yaraynaysaa madax xanuun;
waxay kordhisaa caanaha hooyooyinka kalkaaliyaha;
waxay xakameysaa mareenka caloosha iyo mindhicirka;
yaraynaysaa heerka sonkorta iyo kolestaroolka;
wuxuu leeyahay saameyn wax ku ool ah oo saameyn ah;
waxay kordhisaa rabitaanka cuntada.
Tani waa sida noocyada kala duwan ee bogsashada guryaha leeyahay.
daaweynta wadnaha iyo kelyaha;
ee cudurada beerka iyo saliingaha;
oo leh qufac iyo calool xanuun;
oo leh dhiig-karka;
ee cudurada nidaamka genitourinary;
ee cudurada mareenka mindhicirka;
naas nuujinta - si loo kordhiyo nuujinta;
Had iyo jeer ma suurtogal tahay in la qaato?
Isticmaalka cawska aan muuqda lahayn, oo la siiyo xitaa ilmo dhasha iyo haweenka uurka leh halkii laga faa'iideysan lahaa, mararka qaarkood waxay dhaawici karaan jidhka, haddii aysan u hoggaansamin qiyaasta.
Ka hor intaanad bilaabin daaweyn, hubi inaad la tashato dhakhtarkaaga!
Ha qaadan dill:
Buufin. Haddii aad qabtid cadaadis dhiig oo hooseeya, ka taxaddar adeegsiga cagaaran, maaddaama ay u egtahay in la yareeyo.
Bil kasta. Maadaama dilladu dhiig ka yar tahay, waxay kordhin kartaa socodka dhiigga.
Calaamadaha xasaasiyadda. Saliidaha muhiimka ah ee dilladu waxay keeni kartaa xasaasiyad.
Xasaasiyad shakhsi ahaaneed.
Sidee loo kariyaa oo u cabbaa ujeedooyinka daawooyinka?
Sida maqnaashaha, dill ayaa loo isticmaali karaa labadaba si gooni ah iyo iyadoo la raacayo geedo kale oo daaweyn. Waa maxay sababta loo isticmaalo kiimikada waxyeelada leh, haddii dabiicigu uu si naxariis leh nagu siiyey! Laakiin si ay u noqoto daaweyn lagu guuleysto, waa in uu ogaadaa dhammaan waxyaabihii loo diyaariyey daawada. Sidee loo darsadaa oo cabaa daawada?
Waxaad diyaarin kartaa daroogada labada fennel lafteeda cusub oo la qalajiyey, iyo laga bilaabo abuurkooda:
Cagaarka cusubi ma dhajin, waxaa fiican inaad ku darto saladh ama suxuun kale. Sidaas darteed dhammaan fitamiinada waa la ilaalin doonaa.
Laakiin waad qalajin kartaa dillinka, dhakhtarka dabiiciga ahi wuxuu ku faraxsan yahay inuu kuu adeego wakhti kasta sanadka. Dill ayaa lagu kaydin karaa 3-4 sano.
Qaado oo ah geedo geedo ah oo la jarjarey ku shub hal galaas oo biyo ah.
Ku rid dab yar, karkari wax ka badan 2-3 daqiiqo.
Ku dabool shukumaan, ku adkeyso nus saac, cadaadis.
Isticmaal 100 garaam 3 jeer maalintii, doorbiday qaabka kuleylka.
Faleebo ee geedo
Qaado oo ah geedo la qalajiyey ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya, jeermiska saacad, filter, qaado nus koob 3 jeer maalintii kahor cuntada. Faleebo waa suurad wacan si loo kariyo darmuus.
Ma keydin kartid galmada in ka badan hal maalin, waayo daaweynta ugu wax ku oolka ah waa in la adeegsadaa oo keliya marin-habaabin cusub.
Faleebo abuur ah
Diyaarinta faleebo abuur ah waa mid aad u fudud, geeddi-socodkuna wuxuu u eg yahay shaaha biya-bax:
Waa inay qaataan qaado oo la jajabiyey (qiyaastii 25 garaam) oo ah miraha, ku shub hal galaas oo biyo karkaraya.
U diyaari 40-50 daqiiqo, daadi.
Soodhiga keenaya inuu ku daboolo 2 qaado oo dhawr jeer ah maalintii, 30-40 daqiiqo cuntada ka hor. Faleereynta waxaa ugu wanaagsan in la qaato qaabka kuleylka.
Decoction ee abuurka
Qaado oo ah geedo dill ah ku shub hal galaas oo biyo ah.
Geli dabka, isku kari ilaa 15 daqiiqo.
Ha u istaag, adkee oo isticmaal.
Waxaa lagula talinayaa inaad cabto nus koob oo maraq diiran dhawr jeer maalintii kahor cuntooyinka.
Abuurka dill wuxuu noqon karaa bacda budada ah oo loo qaado qaaddo, ku maydhin biyo kulul. Laakiin leh waqti dheer isticmaalka dill sida durayo ah, si looga fogaado jilicsan jidhka, waxaa ka wanaagsan inaad u isticmaasho malab. Abuurka ku beeray malab dabiici ah oo cun cunno qaado seddex jeer maalintii. Ku kaydi saxan dhalada meel qallalan oo laga ilaaliyo qorraxda.
Qeybta caadiga ah ee daaweynta ee daaweynta kor ku xusan waa 2-3 toddobaad, ka dib taas oo lagama maarmaan ah in aad baaritaanka ka qaaddo iyo kaadida iyo dhiig si loo baaro.
Dhamaantoodna, ma ahan wax la mid ah in Giriiggii hore ee ku guuleystay tartanno la siiyey, marka lagu daro ubaxyada laurelka ah, ubaxyo ka soo baxa laamaha dill. Hellenes caqli badan ayaa ogaa waxyaabo badan oo ku saabsan sifooyinka bogsiinta dhirta, iyo tan oo ay bixiyaan abaalmarinta cagaarka mucjiso this, sababtoo ah suurtagal ma ahan in ay wacdo si kale. Waxay abuurtaa mucjisooyin run ah:
iyadoo isticmaalka joogtada ah ee infusions of geedo this gudbaan gebi ahaanba kalluunka iyo bararka wadnaha, barar hoos indhaha;
Dheef-shiid kiimikaad waa la soo celiyaa;
si weyn u hagaajinaysa xaaladda nidaamka wadnaha;
Maqaarka waa la nadiifiyaa.
Raac talooyinkayaga, waxaadna ku faraxsanaan doontaa natiijada daaweynta.Ka dib oo dhan, waxaa la og yahay in daaweynta dill, marka lagu daro in laga takhaluso dhibaato gaar ah, jidhka oo dhan waa la bogsadaa. Taasi waa wax ku saabsan daaweynta dill. Noqo mid caafimaad qaba, ha xanuunsan!